15 Jehova wee gaa n’ihu ịgwa Mozis na Erọn, sị: 2 “Gwanụ ụmụ Izrel okwu, sịnụ ha, ‘Ọ bụrụ na ihe esi nwoke n’ihe o ji bụrụ nwoke na-agbapụta, ihe ahụ na-agbapụta ya n’ahụ́+ bụ ihe na-adịghị ọcha. 3 Ihe a na-agbapụta ya n’ahụ́ ga-eme ka ọ ghara ịdị ọcha: Ma ihe ọ̀ na-agbapụta ya n’ihe o ji bụrụ nwoke ma ọ bụ na ihe ahụ na-agbapụta ya n’ahụ́ sụchiri ihe o ji bụrụ nwoke, ọ ga-eme ka ọ bụrụ onye na-adịghị ọcha. 4 “‘Ihe ndina ọ bụla onye ahụ ihe na-agbapụta n’ahụ́ dinara ga-abụ nke na-adịghị ọcha, ihe ọ bụla ọ nọdụrụ ọdụ na ya ga-aghọ ihe na-adịghị ọcha. 5 Onye ọ bụla metụrụ ihe ndina ya aka ga-asụ uwe ya, ọ ga-asakwa ahụ́ na mmiri wee bụrụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede.+ 6 Onye ọ bụla nọdụrụ ọdụ n’ihe onye ahụ ihe na-agbapụta n’ahụ́ nọrọ ọdụ ga-asụ+ uwe ya, ọ ga-asakwa ahụ́ na mmiri wee bụrụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede. 7 Onye ọ bụla ahụ́ onye ahụ ihe na-agbapụta n’ahụ́+ metụrụ ga-asụ uwe ya, ọ ga-asa ahụ́ na mmiri wee bụrụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede.+ 8 Ma ọ bụrụ na onye ahụ ihe na-agbapụta n’ahụ́ agbụsa onye dị ọcha ọnụ mmiri, ọ ga-asụ uwe ya, saakwa ahụ́ na mmiri wee bụrụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede. 9 Ihe ọ bụla onye ahụ ihe na-agbapụta n’ahụ́ ji nọkwasị n’elu ịnyịnya+ ga-aghọ ihe na-adịghị ọcha. 10 Onye ọ bụla metụrụ ihe ọ bụla ọ nọ ọdụ na ya aka ga-aghọ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede; onye ọ bụla bukwaara ya ga-asụ uwe ya, ọ ga-asakwa ahụ́ na mmiri wee bụrụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede. 11 Onye ọ bụla onye ahụ ihe na-agbapụta n’ahụ́+ metụrụ aka mgbe ọ na-ejibeghị mmiri kwọọ aka ya ga-asụ uwe ya, saakwa ahụ́ na mmiri ma bụrụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede. 12 A ga-akụrikwa ite ụrọ nke onye ahụ ihe na-agbapụta n’ahụ́ metụrụ aka;+ a ga-ejikwa mmiri saa arịa ọ bụla e ji osisi mee.+ 13 “‘Ọ bụrụ na onye ahụ ihe na-agbapụta n’ahụ́ adị ọcha, wee bụrụ onye ihe kwụsịrị ịgbapụta n’ahụ́, ọ ga-agụpụtara onwe ya ụbọchị asaa iji mee onwe ya ka ọ dị ọcha,+ ọ ga-asụ uwe ya wee saa ahụ́ ya na mmiri e si n’iyi kute;+ ọ ga-aghọkwa onye dị ọcha. 14 N’ụbọchị nke asatọ, ọ ga-ewere nduru abụọ+ ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu abụọ, ọ ga-abịa n’ihu Jehova, n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute, wee were ha nye onye nchụàjà. 15 Onye nchụàjà ga-achụ ha n’àjà, otu dị ka àjà mmehie, nke ọzọ dị ka àjà nsure ọkụ;+ onye nchụàjà ga-ekpuchiri ya mmehie ya n’ihu Jehova n’ihi ihe ahụ na-agbapụta ya n’ahụ́. 16 “‘Ọ bụrụ na ọbara ọcha+ esi n’ahụ́ nwoke pụta, ọ ga-eji mmiri saa ahụ́ ya niile, ọ ga-abụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede. 17 A ga-ejikwa mmiri sụọ uwe ọ bụla nakwa akpụkpọ anụ ọ bụla ọbara ọcha ahụ mesara, ọ ga-abụkwa nke na-adịghị ọcha ruo mgbede.+ 18 “‘Ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị edinaa, ọbara ọcha ewee pụta, ha ga-eji mmiri saa ahụ́ wee bụrụ ndị na-adịghị ọcha+ ruo mgbede. 19 “‘Ọ bụrụ na ihe na-agbapụta nwaanyị n’ahụ́, ihe ahụ na-agbapụta ya n’ahụ́ ewee bụrụ ọbara,+ ọ ga-anọ n’adịghị ọcha+ nke ịhụ nsọ ya+ ruo ụbọchị asaa, onye ọ bụla metụrụ ya aka ga-abụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede. 20 Ihe ọ bụla o dinara na ya mgbe ọ na-adịghị ọcha n’ihi ịhụ nsọ ya ga-abụ ihe na-adịghị ọcha,+ ihe ọ bụla ọ nọkwara ọdụ ga-aghọ ihe na-adịghị ọcha. 21 Onye ọ bụla metụrụ ihe ndina ya aka ga-asụ uwe ya, ọ ga-asakwa ahụ́ na mmiri wee bụrụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede.+ 22 Onye ọ bụla metụrụ ihe ọ bụla ọ nọrọ ọdụ aka ga-asụ uwe ya, ọ ga-asakwa ahụ́ na mmiri wee bụrụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede.+ 23 Ọ bụrụ na ọ bụ n’ihe ndina ma ọ bụ n’ihe ọzọ ka ọ nọrọ ọdụ, ọ bụrụ na o metụ ya aka+ ọ ga-abụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede. 24 Ọ bụrụ na e nwee ka ya na nwoke si dinaa, adịghị ọcha nke ịhụ nsọ ya ewee mesa ya,+ nwoke ahụ ga-abụ onye na-adịghị ọcha ruo ụbọchị asaa, ihe ndina ọ bụla nwoke ahụ dinara na ya ga-abụ ihe na-adịghị ọcha. 25 “‘Ma ọ bụrụ na ọbara nke na-agbapụta nwaanyị n’ahụ́ agbaa ya ọtụtụ ụbọchị+ n’oge na-abụghị oge ịhụ nsọ ya,+ ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọbara agbaa ya gafee oge adịghị ọcha nke ịhụ nsọ ya, ụbọchị niile nke adịghị ọcha ya n’ihi ihe na-agbapụta ya n’ahụ́ ga-adị ka ụbọchị adịghị ọcha nke ịhụ nsọ ya. Ọ bụ onye na-adịghị ọcha. 26 Ihe ndina ọ bụla o dinara na ya n’ụbọchị ndị ahụ ihe na-agbapụta ya n’ahụ́ ga-adịrị ya ka ihe ndina nke oge adịghị ọcha nke ịhụ nsọ ya,+ ihe ọ bụla ọ nọkwara ọdụ ga-aghọ nke na-adịghị ọcha dị ka adịghị ọcha nke oge ịhụ nsọ ya. 27 Onye ọ bụla metụrụ+ ha aka ga-abụ onye na-adịghị ọcha, ọ ga-asụ uwe ya, saakwa ahụ́ na mmiri wee bụrụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede. 28 “‘Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ dịwo ọcha wee bụrụ onye ihe na-adịkwaghị agbapụta n’ahụ́, ọ ga-agụpụtara onwe ya ụbọchị asaa, ha gasịa, ọ ga-abụ onye dị ọcha.+ 29 N’ụbọchị nke asatọ, ọ ga-ewere nduru abụọ+ ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu abụọ wetara onye nchụàjà n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute.+ 30 Onye nchụàjà ga-achụ otu n’àjà dị ka àjà mmehie, chụọkwa nke ọzọ dị ka àjà nsure ọkụ;+ onye nchụàjà ga-ekpuchiri ya mmehie+ ya n’ihu Jehova n’ihi ihe ahụ na-adịghị ọcha nke na-agbapụta ya n’ahụ́. 31 “‘Unu ga-emekwa ka ụmụ Izrel zere ihe ga-eme ka ha ghara ịdị ọcha, ka ha ghara ịnwụ n’adịghị ọcha ha maka imerụ ụlọikwuu m, bụ́ nke dị n’etiti ha.+ 32 “‘Nke a bụ iwu banyere nwoke ihe na-agbapụta n’ahụ́+ na nwoke ọbara ọcha si n’ahụ́ ya pụta,+ o wee mee ka ọ ghọọ onye na-adịghị ọcha; 33 nakwa nwaanyị nọ ná nsọ ya,+ bụ́ onye nọ n’adịghị ọcha ya, nakwa onye ọ bụla ihe na-agbapụta n’ahụ́,+ ma ọ̀ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị, ma ọ bụ nwoke nke ya na nwaanyị na-adịghị ọcha dinara.’”